संसद पुनस्र्थापना नै उत्तम विकल्प -
संसद पुनस्र्थापना नै उत्तम विकल्प
१५ पुष २०७७, बुधबार ०९:०८ Tamakoshi SandeshLeaveaComment on संसद पुनस्र्थापना नै उत्तम विकल्प
राजनीतिक शास्त्रका अनुसार लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै जनताको इच्छाबमोजिम चल्ने शासन पद्धतिलाई लोकतन्त्र भनिन्छ तर नेपालमा भने यसका सञ्चालकहरुले आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गर्दै आएका छन् । यसो हुँदा शास्त्रका कुरा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि लोकतन्त्रको बेइज्जत भएको छ । लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै संसारकै उत्कृष्ट शासन पद्धतिको रुपमा लिइँदै आइएको छ । तर, नेपालमा भने लोकतन्त्रलाई नै असफल बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै जनताको चाहनाबमोजिम मुलुक चल्नुपर्छ । हिजो राजाको एकल हुकुमी शासनलाई जनताले नचाहेर नै आज मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका हुन् । तर, अहिले भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद भंग भएपछि शासन पद्धतिका सञ्चालकहरुमाथि जनताको आक्रोश बढेको छ । संविधानले भनेझैँ चरणहरूको पार नगरी गरिएको यो निर्णयले आमजनता स्तब्ध भएका छन् । जनताले बनाएको संविधानलाई कुनै एक व्यक्ति विशेषको सनकको भरमा असंवैधानिक रूपमा गरिएको संसद विघटनलाई वैधता प्रदान गर्ने राष्ट्रपतिमाथि पनि निक्कै ठूलो नैतिकताको प्रश्न उठ्न थालेको छ । राजनीतिक दलहरुले सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प रहेसम्म संसद विघटनको कल्पना संविधानमा गरिएको छैन, तर, प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढ्नेबित्तिकै संसद विघटन गर्नु यो अराजकभन्दा अरु केही होइन ।
सरकार बनाउने अन्त्मि विकल्पको प्रयोग नगरी मध्यवधिको घोषणा गर्ने परिकल्पना संविधानले नै नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा मध्यवधिको घोषणा गरेकाले अब यसको छिनोफानो अदालतले नै गर्ने देखिएको छ । तर, अदालतले पनि संविधान मात्र नभएर जनताको आकांक्षामाथि पनि विचार गर्नुपर्छ । अदालत भनेको लिखित दस्तावेजलाई टेकेर निर्णय गर्ने निकाय हो । अब नेपालको संविधान, ०७२ लाई नजिकबाट नियालेर अदालतले फैसला गर्ने नै छ । त्यसमाथि यसमा ०५१ सालको नजिरलाई पनि यहाँ ल्याएर संसद विघटन हुन नदिनु नै अहिलेका लागि सबैभन्दा ठूलो बुद्धिमानी हुने देखिएको छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई अत्यन्तै उच्च स्थानमा राखेको छ । राष्ट्रपतिबाट संविधानको संरक्षण हुने कल्पना संविधानमा नै गरिएको छ । राष्ट्रपतिमाथिको यत्ति धेरै विश्वासलाई स्वयं राष्ट्रपतिबाट पनि संविधानको संरक्षण नहुनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ । देश र काललाई विचार गर्दा पनि अहिले मुलुकले चुनावको खर्च धान्न सक्दैन । कोभिड–१९ ले तहसनहस बनाएको मुलुकले अहिले नै अर्बौँ रूपैयाँ खर्च हुने चुनाव धान्न सक्ने अवस्था नरहेको र प्रधानमन्त्रीको सनकका भरमा जुनसुकै बेला संसद विघटन गर्दा मुलुक झन् अस्थिरतातर्फ अघि बढ्ने हुनाले यस्तो काम भविष्यमा पनि नहोस् भन्नका खातिर यो संसद विघटनको निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याउनै पर्छ । त्यसो त संविधानको कुनै पनि धारामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिइएको छैन । विकल्पहरू भएसम्म संसद विघटन गर्नु कुनै पनि मूल्य र मान्यतामा हुनु हुँदैन । संविधान अनुसार पनि संसद विघटन अवैधानिक छ, त्यसैले तत्काल पुनस्र्थापनाको विकल्प छैन । प्रधानमन्त्रीको सनकका भरमा संसद विघटन हुने हो भने यत्तिका धेरै खर्च गरेर बनाइएको संविधानको कुनै अर्थ रहला त ? सर्वोच्च अदालतले समेत संसद विघटनलाई समर्थन ग¥यो भने आगामी दिनमा अन्य प्रधानमन्त्रीहरूले पनि यो कुकाम दोहो¥याउँदा देश धुजाधुजा हुने छ । सर्वोच्चले यो संसदको विघटनलाई समर्थन ग¥यो भने अर्को आन्दोलनले मुलुकलाई अद्योगतितर्फ डो¥याउने छ । देशमा बहुदलीय व्यवस्था कायम गर्न संसदीय प्रणालीलाई मजबुत पार्न, गणतन्त्रलाई सुदृढ पार्न र त्यसको रक्षाका लागि पनि संसद पुनस्र्थापनामा जोड दिइनुपर्छ । विभिन्न राजनीतिक दल, जनताको चाहनाअनुसार संसद विघटनलाई अदालतले वैधता दिनु हुँदैन पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले संसद विघटनको सन्देशले मुलुकलाई मजबुततिर लग्दैन । देशमा राजावादीहरू सडकमा आइराखेका छन्, राजतन्त्रको पुनस्र्थापना, हिन्दू राष्ट्र बनाउन माग भइरहेको बेला सरकारको यो कदमले मुलुकलाई प्रतिगमनतिर डो¥याउने भएकाले अहिलेका लागि संसद पुनस्र्थापनाको विकल्प छैन ।
लोकतन्त्रमा एक जनाको सनकको भरमा संसद विघटन हुने हो भने यो भन्दा अर्को गलत व्यवस्था अरु हुनै सक्दैन । विश्वमा अत्यन्तै सफल र रुचाइएको लोकतन्त्रलाई नेपालका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले दुरूपयोग गर्ने अधिकार कस्ले दियो ? आफ्नो हातमा अधिकार वा शासकीय शक्ति हुनेबित्तिकै यस्तो सामन्तवादको अभ्यास गर्न नेपाली जनताले शासन सत्ता सत्ता दिएका होइनन् । अहिले संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा छ । अदालतले जनताको इच्छाबमोजिम फैसला गर्ने छ भन्ने सबैको आसा छ । लोकतन्त्र यत्ति कमजोर नहोस् कि कुनै एक व्यक्तिको सनकमा संसद विघटन, संकटकालजस्तो अप्रिय कदम चाल्ने काम होस् ।
संसद विघटनविरुद्धको सबै रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलाशमा हुने भएको छ । संविधानमा प्रधानमन्त्रीले एकैपटक वा अरु सम्भावना हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्न सक्दैनन् । अहिलेको अवस्था अरु सरकार बन्ने अवस्था नरहेको होइन । यो त आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने सम्भावना बढेपछि अरुलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिनका लागि कुर्सीका खुट्टा नै भाँच्ने असंवैधानिककाम भएको छ । यो मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा पुगेको हुनाले अब संविधानबमोजिम नै यसको छिनोफानो हुने देखिन्छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिई बुधबार सुनुवाइ भएका १२ सहित थप एक रिटको एक साथ संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको छ । आदेश अनुसार अब सबै रिटको शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने देखिन्छ । आवश्यक प¥यो भने यो मुद्दाको सुनुवाईका लागि बृहत इजलास गठन गरेर देश र जनतालाई लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास गराउन वा न्यायालयप्रतिको आस्था बचाउन पनि संसद पुनस्र्थापना हुनु आवश्यक छ ।
कोभिड–१९ ले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई तहसनहस बनाएको अवस्थामा मुलुकले निर्वाचन थेग्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा नियमित निर्वाचन हुने भए पनि यसलाई एक वर्ष पछाडि धकेल्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको चाहनामा निर्वाचन गराउनु नेपाली जनतामाथि कुठाराघात हो । यो मुद्दा संविधानको धारासँग सम्बन्धी भएकाले संवैधानिक प्रश्न रहेकाले संवैधानिक इजलासकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएको सर्वोच्चले पनि देश र काललाई विचार गरेर फैसला गर्नुपर्छ । देश र कालभन्दा पनि संविधानमा लेखिएको कुरालाई आधार बनाइनुपर्छ । जनताको चाहना र संविधानविपरीत प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको हुनाले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने देखिएको थियो । तर, सर्वोच्चले यसलाई संवैधानिक इजलाशमा पठाएकाले अब त्यहाँबाट यसबारे परिभाषा हुने नै छ । कतिपयले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने अनुमान गरे पनि अदालतले अनतरिक आदेश दिनु अस्विकार गरेकाले यसबारे छिट्टै आगामी शुक्रबार छिनोफानो हुन देखिन्छ ।
संसारकै उत्कृष्ट संविधान लेखेको भनेर भन्दै आएका राजनीतिक दलहरूले अहिले संविधानलाई आ–आफ्नो सुविधामा व्याख्या गरेर आमजनताको मानसपटललाई एकपटक फेरि हल्लाइदिएका छन् । यदि संसारकै उत्कृष्ट संविधान थियो भने एक जनाको रिसको झोँकमा प्रतिनिधिसभा किन भंग भयो ? प्रधानमन्त्रीको झोँकमा संसद तुरुन्तै विघटन हुँदा ती राजनीतिक दलहरू के हेरेर बसिरहेका छन् ? संविधानलाई आ–आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गरेर फेरि नेताहरू नै प्रमुख हुने हो भने संविधान लेख्न दुई÷दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुको अर्थ रह्यो र ? प्रधानमन्त्रीको आवेग र इच्छाअनुसार कायम रहने संसदको के नै अर्थ रह्यो र ? संविधानमा सही गरेको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीबाट संवैधानिक कु गर्नु सोह्रै आना अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ । यो कदमविरुद्ध अब राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर निचोड निकाल्नुपर्छ ।
संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा धेरै रिट दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो मनलाग्दी कदमलाई अब अदालतले सुल्झाउनु पर्छ । गरिब देशले बारम्बारको निर्वाचनको खर्च धान्न नसक्ने र जनतामा झन् निरासा पैदा भएकाले व्यवहारिक तवरबाट अब संसद विघटनलाई अस्विकार गरेर यहि संसदलाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ ता कि आगामी प्रधानमन्त्रीको सन्कीको भरमा संसदजस्तो गरिमामय निकायलाई खेलौना नबनाइयोस् । यसबारे सर्वोच्चमा नजिर पनि छ । यहि नजिरलाई आधार मान्दै सर्वोच्चबाट संसद विघटनलाई असंवैधानिक मान्नुपर्छ । संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध धेरै कानुन व्यवसायी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेकाले अब बल सर्वोच्चमा पुगेको छ । सर्वोच्चले मुलुकको अवस्था, जनताको चाहना र स्थायित्वका लागि सहि निर्णय लिनुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि अब यो निर्णय उल्ट्याउने विकल्प न्यायालय मात्र छ । त्यसैले अब यस्तो घडीमा सर्वोच्चले अत्यन्तै निष्ठाका साथ बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
संसद विघटनको विपक्षमा रहेका संविधानका जानकारहरूले अहिलेको संविधानले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताउँदै आएका छन् । अब यो काम सर्वोच्चले छिनोफानो गर्नुपर्छ । अधिकांश राजनीतिक दलहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर भनेको अवस्थामा अदालतले पनि उनीहरूको भनाइलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ । यसैबीचमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई आफ्नै पार्टीका नेताहरूले काम गर्न नदिएकाले संसद विघटन गर्नु परेको बताएका छन् । आफ्नो परिवारको कुरा मिलाउन नसक्ने व्यक्ति÷व्यक्तित्वले मुलुक सञ्चालन गर्न सक्लान त ? त्यसैले परिवार पनि मिलाउन नसक्ने व्यक्तिको निर्णय जनताले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कहिँ कतै लेखिएको छैन । आफू मात्र पदमा बसिराख्नुपर्ने, अरुलाई भने बस्नै नदिएर कुर्सीको खुट्टा भाँच्ने मनसायबाट ग्रसित व्यक्तिको लहैलहैमा लागेर देश र जनताको चाहनाविपरीत चल्नेलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्नु हुँदैन । नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि हरेक वर्ष निर्वाचनमा जानु पर्ने हो भने योभन्दा त उहि राजतन्त्र नै ठिक थियो । पञ्चायती व्यवस्थामा कम्तीमा पाँच वर्षमा मात्र चुनाव हुन्थ्यो तर अहिले त कुर्सीमा पुग्न नेताहरुले निर्वाचनको घोषणा गर्नु कुनै पनि कोणबाट सैह्य हुनै सक्दैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनले जन्माएका प्रश्न
८ आश्विन २०७६, बुधबार ०२:२९ Tamakoshi Sandesh
१० भाद्र २०७७, बुधबार ०४:३२ Tamakoshi Sandesh